[Ankapobeny ] 04 Jiona, 2009 13:36
Bacc baoritra ny @ty taona ity
Mande ny feo eo anivon'ireo mpampianatra fa terena ry zareo hanome isa tsara ny mpianatra rehetra manala fanadinam-panjakana @ ity taona ity. tsy mijery izay votoatiny sy ny fahaizana ny mpampianatra rehefa mitsara ny fanadianana fa kosa ny "présentation" ihany no tsaraina ary tonga dia afahana avy hatrany izay mpianatra mahay mikajy ny taratasim-panadianana.
(raha ny marina diatokony higadra koa ilay nanodina ity fiaramanididina ity)
Tsy misy kosa anefa ny tambin-karama omena ireto mpampianatra mampanao "cours" ireto. Dia inona moa izany fa tsy dia tonga @ ilay fitenenana oe "bacc" baoritra izany no ho zaraina maimaim-poana @ ty izay tsy afaka kosa dia mety oe légalisite ny ray aman-dreny angamba na misy oe Raveloson ny anarana. lol Simbaina mihitsy ny taranaka malagasy e! izay no hita sy tsapa @ izao fotoana izao.
Nahafaly ny malagasy kosa ny fahavoazana mahazo ny frantsay ankehitriny na eo @ lafiny baolina kitra resy ny nigeria 1 sy zero na eo @ tennis lavo t@ 1/4 i Monfils G. na ny lafiny fitanterana toy ny nahazo ilay sidina AF 447 farany teo iny ary dia misy ny olona tsy oe mandatsa akory fa miteny oe ratsy toetra laotra ireto vazaha frantsay ireto ka valin'Andriamanitra @ zavatra tsy ampoiziny avy eo ary maharary azy mihitsy izany kapoka izany. Eo indray ny sasany miteny oe naninona ary tsy ilay sidina nitondra ny fat no nidoboka faty tany. Tsy anjaratsika no mandahatra fa voalahatra kosa anefa isika e.
Eo ampiandrasa ny mpampandry tany sy izay mety ho mpikarama an'ady ho avy izay nampanantenain'ny filoha ravalomanana kosa dia notsarain'ny fitsarana higadra 4 taona sazy mihatra ny tenany. Nividy Air force II moa no fahotana nahafaty nataony ka izay no sazy omena azy @izany. Dia manotany tena ny mpanaram-baovao manao oe mbola maro koa ny higadra reheva rava ny fat satria vao tsy ela akory dia vola be 10.000€ no nolaniana indray alina fotsiny tany frantsa tany. Ary inona hoy ianareo no mba zestiavana aty @ mpijery dia ny oe na Ravalomanana aza mbola tsy nanitsaka izany toerana izany!!!
Anjaratsika ny mieritreritra oe iza no basin'arifito @ izany.